“Waxaan xukuumadda ka codsanayaa inay isticmaasho xukunka dilka ah”…Eng Faysal Cali Waraabe | Somaliland.Org
November 29, 2008	Hargeysa(Somaliland.Org) Xisbiyada Mucaaradka ah ee Somaliland KULMIYE iyo UCID ayaa soo dhaweeyay natiijada hordhaca ah ee xukuumadu ka soo saartay baadhista cidii ka danbeysay qaraxyadii sadexanka ahaa ee 29-kii October laga fuliyay magaalada Hargeysa.
Kolay baadhistii way socotaa, laakiin waxa cadaatay oo Ilaahay mahadii ah in qof qudhi reer Somaliland (dadkaa isqarxiyay) ahaa, kuwa xun-xun ee baxsaday ee reer Somaliland ah ee gacanta siiyayna waa la yaqaanaa, Inshaa Allaahu waynu ka dabo tegi doonaa.
”Dhinacyo kala duwan ayaa xukuumadda ku eedeeyay qaabka ay qaraxyadii ka dib uga hawlgashay, sida xidhitaanka jidadka halbowlaha ah qaarkood iyo baadhista xoogan ee ciidamadu sameeyaan.
Sidaa aawadeed, Guddoomiye Faysal Cali Waraabe oo arrintaa wax laga waydiiyay, waxa uu si adag u naqdiyay qaabka hawlgalka Xukuumada ee arrintaa ku saabsan, taas bedelkeedana waxa uu tilmaamay in loo baahanyahay in la sameeyo xeerka amniga qaranka. “Xukuumadda waxaan u sheegayaa qorigu inta uu xeradiisa ku jiro ayaa laga nabad qabaa.
Haddii qoriga xeradiisa laga soo saaro khasaare badan buu keenaa, imikana dhimasho iyo khasaare badan buu keenay. Arrintu maaha in waddooyinka la is taago oo gawaadhida la baadho habeenkii oo shacbiga reer Somaliland cidhiidhi la geliyo.
Laakiin, waxa weeye in dawladdu Shuruuc soo saaro oo ay Nabadgelyada ku adkaynayso, Argagixisadana kula dagaalamayso, shacbiga iyo asxaabta qarankuna gacan ku siiyaan. Markaa waxaanu leenahay dawladda, ciidamadan aan tabobarnayn halaga saaro ee dadkii baadhaya, tuugtuna soo hoos gelayso.
Ciidamadeenu calaamad ma leh, derajo ma leh oo qof waliba wuu soo iibsan karaa Tuute (dirayska ciidamada). Markaa ciidamadan magaalada halaga saaro, waayo dawladdii baa dadka Argagixiso ku abuuraysa.
Samaynta xeerkii Argagixisada lagula dagaalami lahaa kii Nabadgelyada lagu adkayn lahaa in la soo dhigo dadka oo dhan iyo Baarlamaanku waa u diyaar.
Wadanku shuruuc buu u baahan yahaye, askari aan tabobarnayn oo wadada lagu soo daayay habeenkii oo 50 mitir isku jiraa nidaam maaha. Waxa ka muuqata askarta nidaam la’aan, waxaan fowdo ahayna magaalada kuma soo kordhinayaan.” Sidaa ayuu yidhi Guddoomiyaha xisbiga UCID oo ka hadlayay hawlgalada xukuumaddu ka samaysay qaraxyadii iyo bedelka talaabada ay qaaday.
Mar wax laga waydiiyay sida uu u arko wefti Wasiiro ah oo Arbacaddii xukuumaddu u dirtay wadamada Kenya, Itoobiya iyo Jabuuti, si ay ugala soo hadlaan dhibaatada qaraxyadii Hargeysa iyo gacanta ay Somaliland ka siin karaan, waxa uu sheegay in bixitaankoodu haboonaa waqti ka horaysa xilliga safarkooda. “Horta in wefti baxo way fiican tahay.
Laakiin, wefti baxay mar dambe ayay baxeen, adduunku markuu diyaarka ahaa ee uu lahaa maxaad na waydiisanaysaana waxba may waydiisan, imikana waa caadadoodoo laba Wasiir bay isku dareen oo wax nidaam ah iyo wax qoraal oo ay adduunka hor dhigayaan ma jirto, balse way iska fiican tahay inay dadka la soo kulkulmaan.
Laakiin, waxaan hubaa wax habaysan oo dawladdaysan – nidaamsan in aanay la tegin. Siyaasad iyo istaraatijiyad ay leeyihiin naga caawiya lama tegayaan, loogamana baran dawladda Rayaale,” ayuu yidhi Injineer Faysal Cali Waraabe.
Dhinaca kale, mar aanu wax ka waydiinay samaynta Guddi isku-dhaf ah oo doorkoodu ahaa inay ka hawlgasho arrimaha diiwaangelinta iyo doorashooyinka oo qayb ka ahayd heshiis ay mucaaradka iyo xukuumaddu ka gaadheen khilaafkoodii bishii May ee sannadkan, waxa uu sheegay in samaynta Guddigaas uu Madaxweyne Rayaale hor taagan yahay.
“Arrintaasi waxay ka mid ahayd arrimaha ugu muhiimsan ee lacagta (Diiwaangelinta) la inoogu soo daayay, guddi heshiiska ku jirtay bay ahayd, waxay ahayd guddi wanaag samaynaysay oo inoo wanaajinaysay diiwaangelinta iyo doorashada, guddi aanu isku raacay (hogaamiyeyaasha xisbiyada) bay ahayd.
Laakiin, ilaa hadda may hirgelin, xaga xisbiga UDUB-na way ka hirgeli wayday, waxyaabaha imika naylagu xidhayna way ka mid tahay. Markaa waxaanu jecelahay in aanu aniga iyo Guddoomiye Siilaanyo arrintaa kala hadalo Madaxweynaha, sidii ay guddigaasi hawshooda si degdeg ah ugu bilaabi lahaayeen.” Sidaa ayuu yidhi Guddoomiyaha xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe.
Dhinaca kale, Guddoomiye Ku-xigeenka koowaad ee xisbiga Mucaaradka ah ee KULMIYE Muuse Biixi Cabdi oo aanu wax ka waydiinay aragtooda ku saabsan natiijada xukuumaddu soo bandhigtay ee la xidhiidha qaraxyadii Hargeysa, ayaa sheegay inay tahay mid ku dhawaaqisteeda la sugayay.
“Arrintaa xukuumaddu ku shaacisay cidii geysatay weerarkii Argagixiso ee Hargeysa ka dhacay waa arrin loo baahnaa oo aynu sugaynay, sababta loogu baahnaana waxa weeye; cida ina soo weerartay in aynu ogaanaa waxay daruuri u tahay wax iska caabinteena iyo nabadgelyadeena oo ay kow ka tahay.
Waxa weeye, marka aynu cadowgii ogaano ee aynu isla garano inuu kaa yahay oo ah talaabadii koowaad, talaabada xigtaa waxa weeye in cadowgii la derso, kow siduu cadowgu u fikirayo, khidadda iyo habka uu u dagaalamo, tababarkiisa, deegaankiisa, meelaha uu inoo soo mari karo ama ka soo dusi karo, hubkiisa, ujeedooyinkiisa fog iyo kuwa dhow.
Kolka intaa iyo xaaladdo kale oo badan laga derso cadowga, ayaa waxa markaa dabadeed aynu qaabaynaynaa nidaamka amaankeena loo sugi karo.
Markaa waa talaabo hore loo qaaday ayaan qabaa, oo xaga amaanka ah, waayo cadowgii baynu ogaanay.” Sidaa ayuu yidhi Muuse Guddoomiye Ku-xigeenku.
Muj. Muuse Biixi oo la waydiiyay in xukuumaddu Mucaaradka wadatashi kala yeelatay qaabka arrintan loo wajahayo, waxa uu sheegay in xukuumaddu wixii maamulka la xidhiidha ay leedahay, isla markaana aanay ku farogelinayn. Balse, maalintii dhacdada ee 29 Oct iyo laba goor oo kaleba ay xukuumadda la kulmeen, isla markaana talooyin u gudbiyeen.
“Laakiin, waa arrin waajib ah oo talooyinkaa aan imika kuu sheegayo iyo kuwo kaleba waanu siinay,” ayuu yidhi.
Guddoomiye Ku-xigeenka koowaad ee xisbiga KULMIYE oo sidoo kale la waydiiyay sida ay u arkaan qaabka ay xukuumaddu uga hawlgashay dhacdadaas, waxa uu sheegay in wixii amaanka la xidhiidha ay dawladdu u xilsaaran tahay.Dhinaca kale, mar la waydiiyay dhismaha guddi isku-dhaf ah oo ka hawlgalaya diiwaangelinta iyo doorashooyinka oo ay Mucaaradka iyo xukuumaddu ku heshiiyeen bishii May ee sannadkan, waxa uu sheegay in haatan wadahadalo uga socdaan xisbul-xaakimka UDUB. “Weli gudigaasi sidii la rabay ummay hana-qaadin, hawsheedii iyo sidii ay u hawl-geli lahayd ayaanu Xukuumada ka wada hadlaynaa.” Sidaas ayuu yidhi Gudoomiye ku xigeenka koobaad ee KULMIYE.
Mar la sii weydiiyay waxa hortaagnaa gudigaasi in la sameeyo, mar hadii ay heshiiskii ka mid ahayd waxa uu ku jawaabay Muuse Biixi oo uu yidhi.
“Howl kasta oo la galo dood ayaa ka timaada, waa run gudigaasi inay hawl-gasho wey ahayd oo heshiiska wey ku jirtay, laakiin dhinac ayay ka timi arrintii oo ay ka soo noqotay inay ka doodayaan, markaa arrintaa waa lagu heshiiyay iyo laguma heshiin mid-na ku odhan maayee wadahadal ayaa nooga socda, berito (Maanta) ayaanu ka balan-sanahay”.